Ukuphupha kwethanga Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ingaba yintoni unobangela wephupha malunga nethanga? Ngaba kukubonakalisa nje imisebenzi yethu yezemidlalo kubomi bokwenyani, ukuba sifuna ukuqeqesha amathanga ethu? Okanye mhlawumbi ngaphezulu kufihlwe ngasemva kwephupha elinje? Yintoni eyitolikwa ngephupha yazi malunga nomfuziselo wephupha "ithanga"?
1 Uphawu lwephupha «ithanga» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ithanga» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ithanga» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ithanga» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha "ithanga" linxulunyaniswa kakhulu nomqondiso wephupha "umlenze", kuba ithanga liyinxalenye yomlenze. Kungenxa yoko le nto ithanga lisetyenziswa njengomqondiso ephupheni. Uzinzo y U ku kholosa ijongiwe. Umphuphi unokuqonda ngephupha lakhe ukuba uphilile ebomini kwaye uyabuvavanya ngokuqinisekileyo ubomi bakhe. Ngokukodwa xa ithanga eliphilileyo libonakala ephupheni, uphawu lwephupha lubhekisa kule ngcaciso.
Ukuba ithanga liqeqeshwe kakuhle kwaye lenze kakuhle ephupheni, oku kukwaveza ngokuqinisekileyo kutoliko jikelele lwephupha. Ukuphupha kukwindlela elungileyo ebomini kwaye kukhokele ukujonga kwakho kwikamva. Amathanga aqinileyo ephupheni ahlala eluphawu lwamabhongo kunye nethemba. Amathanga amhlophe athambileyo njengophawu lwephupha elazisa ixesha lokonwaba nelonwabisayo el mundo yomlindo.
Isimboli yephupha "ithanga" linokufumana intsingiselo embi, ngakumbi ukuba ithanga lenzakele ephupheni. Kungenxa yokuba ithanga elonzakeleyo ephupheni libonisa ukugula okanye ukungathembeki kwilizwe elinokuvuka. Ukuba iphupha linesifo samathanga okanye ubetha emadolweni ephupheni lakho, le meko yephupha inokukucela ukuba uthembe abanye abantu kunye nokunye. xanduva ukuphatha ubomi bakho. Kuba ukugula kokulala kufanele kukwazise ukuba awusenako ukuma ngeenyawo zakho ebomini bokuvuka. Kuya kufuneka ndiyitshintshe le nto kwixa elizayo. Umlenze oshunqulwe kubude bethanga ungabonakalisa ukulahleka kwemali.
Uphawu lwephupha «ithanga» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni kuyabona kwisimboli yephupha «ithanga» ikakhulu luphawu lokusondela kwinyani kunye nobumbano lwangaphakathi, kunye amandla kunye nolawulo oluphuphayo ebomini bakho.
Ithanga elonzakeleyo okanye eligulayo ephupheni linokuchazwa malunga noloyiko okanye ngokwengqondo. Amathandabuzo bonisa ukuphupha. Ezi ntlungu zilala kwihlabathi elivukayo kwaye zikuthintela ekukhokeleni ubomi obupheleleyo. Ke ngoko, kuya kufuneka ungene emazantsi ovalo lobomi bakho kwaye uzame ukuzilungisa. Oku kuyasebenza ukuba umntu ekubhekiswa kuye une-cellulite ethangeni ephupheni.
Kwakhona, uphawu lwephupha "ithanga" linye ngokokuchazwa kwengqondo kwephupha. icandelo lezesondo ngaphakathi. Apha ithanga libonwa ephupheni njengophawu lwamalungu obufazi. Ukuba ithanga likwabonakala lihle kakhulu kwaye njengophawu lokuphupha, ikwabonisa umnqweno wokwanelisa ngokwesondo ephupheni.
Uphawu lwephupha «ithanga» - ukutolika kokomoya
Kubonwa ngokomoya, amathanga anokuchazwa njengenxalenye yomlenze ephupheni kwaye ke afuzisela okomoya. uzinzo nokomoya ubugorha.